Jubbaland oo ka hadashay kuraasta Golaha Shacabka ee ku harsan – XAMAR POST
Jubbaland oo ka hadashay kuraasta Golaha Shacabka ee ku harsan
Madaxweynaha Dowladd Goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiiradda oo maanta lagaga hadlay qodobo kala duwan.
Madaxweynaha ayaa ugu horrayn golaha uga warbixiyey xaaladda amaanka xili ciidamadda ay ku howlanyihiin sugida amniga deegaanada Jubaland, iyadoo Madaxweynahu uu ku amaanay Ciidaamada sida ay diyaarka ugu yihiin badbaadinta iyo ilaalinta shacabka xili dalka uu doorasho ku jiro.
Dhinaca kale, Madaxweynahu wuxuu golaha warbixin ka siiyay doorashooyinka ka socda guud ahaan dalka iyo si gaar ah Jubaland, isagoo sheegay in ay socdaan dadaalo kala duwan oo ku aadan sidii losoo dhameeystiri lahaa xubnaha xildhibaanada dhiman ee deegaan doorashadoodu tahay Jubaland.
Intaa kadib Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Jubaland ayaa ka warbixiyey xaaladda abaaraha oo kasii daraysa iyo xiriirinta howlaha Gargaarka.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Wasaaradda ay isbuucydan soo socda gurmad gaarsiin doonto qoysas gaaraya (97,000) sagaashan iyo todobo kun oo qoys oo isugu jira raashin iyo lacag Iyadoo todobaadkana ay wasaaradda qaabili doonto wafuud calami ah, Wasiirka waxa uu sheegay in aalada fogaan araga uu ka qayb gali doono madasha arrimaha bini’aadanimada Midwoga Yurub halkaa oo uu kaga warbixin doono arimaha abaaraha ee kajira deegaanada Jubaland.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Jubaland ayaa dhinaciisa golaha oga warbixiyey Tababar ku saabsan dabagalka iyo qiimeynta mashaariicda oo la siiyay dhowr wasaaradood iyo hay’adaha kala shaqeeya Xiriirinta Hay’adaha Caalamiga ah ee ku hawlan gurmadka abaaraha kuwaas oo kala ah.
Mareykanka oo eedeyay Ruushka
Ruushka oo weerar xoog leh ku qaaday caasimada Ukraine ee Kyiv